Khasaare Nafeed oo ka dhashay god ku dumay Macdan-qodayaal | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Khasaare Nafeed oo ka dhashay god ku dumay Macdan-qodayaal
Kinshasa-(SONNA)-Ugu yeraan 50 qof ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen ka dib markii uu ku dumay god macdanta laga qodo bariga jamhuuriyadda Demoqraadiga Congo, sida ay sheegeen saraakiisha maxaliga ah.
Mashaqadan ayaa ka dhacday goob macdanta laga qodo jimcihii gelinkii dambe ka dib roobab mahiigaan ah oo ka da’ay magaalada Kamituga ee koofurta gobolka Kivu.
Barasaabka gobolka Theo Ngwabije Kasi ayaa sheegay in dhacdadan ay ku naf waayeen 50 qof oo u badan dhalinyaro.
Duqa magaalada Kamituga Alexandre Bundya ayaa sheegay in sababta shilkan ay tahay roobabka halkaas ka da’ay taas oo keentay in godadka isku dumaan.”Tirada dhabta ah ee dhimashada wali ma cadda”.
Waxaa uu ku dhawaaqay labo maalmood oo baroor-diiq ah isagoo saraakiisha maxaliga ah ku booriyay in ay soo saaraan meydadka wali ku hoos jira dhoobada.
Sawirro iyo muuqaalo goobta laga soo qaaday oo baraha bulshada la soo geliyay ayaa waxaa ka muuqanayaa boqolaal dad ah oo tuban goobta shilka ka dhacay.
Kumaan qof oo aan xirfadle aheyd ayaa ka shaqeeya macdan qodista dalka Congo, kuwaas oo soo saaray kala bar macdanta Cobalt dunida oo dhan, taas oo laga sameeyo qalabka korantada iyo batariga gaadiidka.
Shilalka ka dhaca goobaha macdanta jamhuuriyadda demoqraadiga Congo ayaa caadi ka ah, iyadoo daraasiin dad ah sanad kasta ku dhintaan waxaana loo aaneeyaa qalab xumo iyo tababarka oo ku yar dadka ka shaqeeya macdanta.
Sanadkii hore, dhoobo ku soo rogmatay goob dahabka laga soo saaro waxaa ku dhintay 16 ruux shilkaas oo dhacay bishii October, iyadoo 43 ruux shilkaas mid lamid ah ay ku naf waayeen.
Previous articleTurkiga oo cambaareeyey xiriirka Israel iyo Carabta
Next articleGuddoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland oo kismaayo lagu aasay